Bitcoin Hardforks ကဘာလဲ? - Blockchain သတင်းများ
အဆိုပါ Bitcoin ကွန်ယက်ကို၌ဤ cryptocurrency ၏ထွန်းကတည်းကချိတ်တွေအများကြီးမှတဆင့်သွားပြီ 2008. ဤရွေ့ကားချိတ်ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအဖြစ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှ developer များကကူညီလို့ယူဆတယ်ခဲ့ကြသည်, TPS ၏အနိမ့်စွမ်းရည် (တစ်စက္ကန့်ငွေပေးငွေယူ), ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့အရွယ်အစား, နှင့်အထွေထွေအတွင်း Bitcoin ကွန်ယက်ကို Overload လွယ်ကူချောမွေ့ရန်. Bitcoin အနေနဲ့ open source ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ကွန်ရက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အသုံးပြုသူကူးယူနိုင်ပါတယ်, modify, နှင့်ကုဒ်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေး. ထို့ကြောင့်, မည်သည့်အသုံးပြုသူချိတ်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်အသစ် protocols များနှင့်ကြိုးဖန်တီးစေခြင်းငှါ, အမည်ရပျော့သို့မဟုတ်ကွန်ယက်၏ hardforks.
Softfork အဟောင်းကွင်းဆက်၏ node များနှင့်အတူဆက်သွယ်ရာမှအသစ်တခုကွင်းဆက်၏ node များတားဆီးမထားဘူးသော blockchain protocol ကိုတစ်ဦးပြန် ပြင်. ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါသည်. အကောင်းဆုံး softfork ဥပမာအသားအရောင်ခွဲခြား Witness ၏သို့မဟုတ် SegWit ဖြစ်ပါသည်. သူတို့လျော့နည်း memory space ကိုသိမ်းပိုက်မယ်လို့ဒီတော့ Network ကိုအသုံးပြုသူများကပိတ်ဆို့အရောင်းအများ၏ဖွဲ့စည်းပုံပိုကောင်းအောင်နိုင်ရန်အတွက်သြဂုတ်လ၌ဤ softfork activated ပါပြီ. လုပ်ကွက်သည့် Bitcoin ကွန်ယက်၏အလုပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုင်ရန်အဘို့အခွင့် softfork.
Hardfork သစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအဟောင်းကို blockchain protocol ကိုနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်ဖြစ်လာသည့်အခါဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းအသစ်တခုကွန်ယက်ကိုကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကိစ္စမှာ, အဆိုပါအသစ်အဟောင်းကွန်ရက်များ၏ node များနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် “ဆက်သွယ်ပြောဆို,” hardfork သဘောတူယန္တရားသူ့ဟာသူပြောင်းလဲနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပြီးကတည်းက. hardforks ၏အကူအညီနှင့်အတူ, ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သောတစ်စက္ကန့်ခုနစျပါးအရောင်းအတက်ကို process ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းအနိမ့်ကွန်ရက်က bandwidth ကိုများနှင့်ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့အရွယ်အစားကြောင်းအဖြစ် Bitcoin ကွန်ယက်၏သော့ချက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစား, အမြားအပွားသည်နှင့်အညီ, ထက်ပိုပြီးကိုင်သင့်ပါတယ် 1 အချက်အလက်များ၏ MB အထိ. Hardforks လည်းအသုံးပြုသူများကိုသစ်ကို cryptocurrencies ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု, အဆိုပါအခြားနည်းလမ်း Bitcoin အဖြစ်.
အတိတ် hardforks ရလဒ်များကို
Bitcoin XT ပထမဦးဆုံး Bitcoin ကွန်ယက်ကို hardfork ဖြစ်ပါသည်, သြဂုတ်လတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် 2015. အဆိုပါ hardfork, Bitcoin Core ၏ source code ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသော, ရန်ဘလောက်အရွယ်အစားတိုးမြှင့်ဖို့ထင်ခဲ့သည် 8 ကို MB, ထိုသို့သောအားဖြင့်မှတက်ကွန်ယက် bandwidth ကိုတိုးမြှင့် 24 တစ်စက္ကန့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ, ဒါပေမယ့် cryptocurrency သတ္တုတွင်းအသိုင်းအဝိုင်းထံမှလိုအပ်သောထောက်ခံမှုရဖို့မပြုခဲ့. Bitcoin XT အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့လိုအပ် 75% အသစ်ကကွန်ယက်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အားလုံးကို Bitcoin ကွန်ယက်ကိုမိုင်းလုပ်သား၏, ဒါပေမယ့်သာ 12% သူတို့အ hardfork ထောက်ခံ. အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, သူ Mike Hearn သည်သူ၏ cryptocurrencies ရောင်းအတွက်စီမံကိန်း left အဓိက developer များထဲကတစ်ခု 2016. ရလဒ်အနေဖြင့်, သာ 20 node များမူလကနေထွက်ခွာခဲ့ကြ 4,000 ယူနစ်, ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ကွန်ယက်ကိုမရနိုင်ပါဖန်ဆင်းသော.
Unlimited hardfork မေလအတွက်လုပ်ကွက်အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ခဲ့သည် Bitcoin 2016, မိုင်းလုပ်သားအနာဂတ်မှာကွန်ယက်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အရွယ်အစားရွေးချယ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်သည့်အခါ. မိုင်းလုပ်သားအဆိုအရ, အဆိုပါလုပ်ကွက်၏အရွယ်အစားချဲ့ထွင်လူတန်းပပျောက်ဒါပေမယ့်လည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်စုစုပေါင်းကော်မရှင်အခကြေးငွေတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းတိုးတက်စေလိမ့်မည်မသာ. သို့သော်ဝေဖန်သူများက hardforks, အဘယ်သူကိုအများစု developer များဖြစ်ကြသည်, ဤနည်းဗျူဟာမိုင်းလုပ်သား၏ကြီးမားသောဗဟိုရေကန်ကွန်ယက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ manipulate စတင်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု.
ဤသည်ကန့်သတ်ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းရည်နှင့်အတူမိုင်းလုပ်သားကွန်ယက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ရေရှည်မှာထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုလုံးဝအစားထိုးလိမ့်မည်ဟု. ထို့ကြောင့်, ကွန်ယက်အများအပြားရေကန်ထဲမှာဗဟိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်. ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း Bitcoin Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲအများအပြားကို bug တွေကိုတွေ့, ယခုနှစ်မေလကပေးသောထို့နောက်ဧပြီလပထမနှင့်များ၏ပျက်စီးခြင်းမှဦးဆောင် 70% ကွန်ယက်အတွက် nodes များ, ထိုသို့သောအားဖြင့်ဤသူချိတ်ဖို့ crypto အသိုင်းအဝိုင်းယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်.
Bitcoin ဂန္ထဝင်စီမံကိန်းသည် Bitcoin ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်စတင်ခဲ့သည်, အဆိုပါ Bitcoin XT hardfork ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းမခံခဲ့သော. စီမံချက်၏ရည်မှန်းချက်ဖို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်တယ်2ကို MB, ပြီးတော့မှ4ကို MB. သို့သော်ဤ hardfork သည့် crypto အသိုင်းအဝိုင်းများ၏လိုအပ်သောထောက်ခံမှုရဖို့မပြုခဲ့. ထက်အလွန်အစကပိုမှာပါ 2,000 node များစီမံကိန်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ,” ဒါပေမဲ့အရေအတွက်ကျဆင်းသွား 100 အားဖြင့် 2017. နိုဝင်ဘာလထဲမှာ SegWit2X ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးစီမံကိန်း၏ developer များပေါ်ပေါ်ထင်ထင် Bitcoin ငွေထောက်ပံ့ထားပြီးမှစီမံကိန်းပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ကြေငြာခဲ့သည်, အသစ်က cryptocurrency.
Bitcoin ငွေဖြစ်ကောင်းအကျော်ကြားဆုံးနှင့်အောင်မြင်သော Bitcoin ကွန်ယက်ကို hardfork ဖြစ်ပါသည်. တစ်အတင်းအဓမ္မ hardfork protocol ၏ရလဒ်အဖြစ်, Bitcoin ငွေပိတ်ပင်တားဆီးမှုပျေါမှာထငျရှား 478,558 အပေါ် 1 သြဂုတ်လ. လမ်းဆုံလမ်းခွ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, ကနေတိုးပွားလာပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရွယ်အစား 1 ကို MB မှ 8 ကို MB, နှင့်ဤ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ကွန်ယက်စွမ်းရည်နှင့်လျှော့ချငွေပေးငွေယူအဖိုးအခတိုးမြှင့်. hardfork ပြီးနောက်, Bitcoin ကိုင်ဆောင်သူသူတို့ရဲ့က e-wallet များတွင် Bitcoin ငွေတစ်ဦးတန်းတူပမာဏကိုခဲ့. အသစ်ကွန်ယက်ကိုနှစ်ခု blockchains အတွက်တစ်ပြိုင်တည်းပါအရောင်းအဝယ်များမှကာကွယ်ပေးသည်တဲ့ယန္တရားပေးထား. ယနေ့တွင်, 13 ဒီဇင်ဘာလ, အဆိုပါ Bitcoin ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဖြစ်ပါတယ် $1,616.84 နှင့်လက်ရှိတွင် cryptomarket အရင်းအနှီးများကတတိယနေရာချနေသည်.
Bitcoin ရွှေ cryptocurrency ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ် hardfork ၏ရလဒ်အဖြစ်အောက်တိုဘာလ 24 ရက်နေ့တွင်သည်ထင်ရှား 491,407 ဟောင်ကောင်ရှိသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတခု Lightning ASIC ကဆောင်ရွက်. စီမံချက်၏ရည်မှန်းချက်မှာမူရင်း Bitcoin ထက် non-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုင်းလုပ်သားများအတွက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုငွေကြေးဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကို Bitcoin ရွှေနှင့်သည် cryptocurrency ဆောင်ပုဒ်ငါ့နိုင်ပါတယ် “Bitcoin နောက်တဖန်ဗဟိုဦးစေ။” အဲဒီအစားအဟောင်းသက်သေပြချက်-of ​​Work ကို protocol ကို hardfork Initiative သစ်ကိုတဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့၏, Equihash. ဤသည် algorithm ကို random access memory ကို၏အရွယ်အစားကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ပါသည် (ရမ်) cryptocurrency Zcash တူးဖော်သည့်အခါများနှင့်လည်းအသုံးပြုပါသည်. ယနေ့တွင်, 13 ဒီဇင်ဘာလ, Bitcoin ရွှေလဲလှယ်မှုနှုန်းဖြစ်ပါသည် $276.88 နှင့်စျေးကွက်အရင်းအနှီးထက်ပို $4.5 ဘီလီယံအထိ.
Bitcoin စိန်ပု hardfork ဖြစ်ပါသည်, သောပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်နိုဝင်ဘာလရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပျက် 495,866. Bitcoin စိန်မိုင်းလုပ်သားအလုပ်၏သက်သေများ၏အသစ်တစ်ခု algorithm ကိုအပေါ်လုပ်ကွက်ဖန်တီး (Pow). လည်း, ဒီ cryptocurrency ဆယ်ကြိမ်အားဖြင့်အလွန်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအနေဖြင့်မတူထုတ်လွှတ်မှု၏ volume ထဲမှာတိုးမြှင့်နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရွယ်အစား 8 ကို MB. developer များကဤ hardfork privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်းကဲ့သို့သောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းယုံကြည်, နှေးကွေးသောငွေပေးငွေယူအတည်ပြုချက်ကို, အသစ်သင်တန်းသားများအဘို့အမြင့်မားသောတံခါးခုံကွန်ယက်ထဲဝငျဖို့. Bitcoin စိန်သတ္တုတူးဖော်ရေးကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်, E-ပိုက်ဆံအိတ်, node များကုဒ်, နှင့် API, အဖြစ် GitHub အပေါ်ပွင့်လင်း source code ကိုထည့်သွင်းဖို့ယခုနှစ်အကုန်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်.
စူပါ Bitcoin, သစ်တစ်ခု cryptocurrency, ပျေါမှာထငျရှား 12 ဒီဇင်ဘာလ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ် Bitcoin ကွန်ယက်ကိုအတွက်ဌာနခွဲများ၏ရလဒ်အဖြစ် 498,888. အဆိုပါစူပါ Bitcoin ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည် “နောက်တဖန် Bitcoin ကိုကြီးမြတ်စေ။” ဒါဟာရိုးရာ ICO အစားဒီပလက်ဖောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆွဲဆောင်၏အသစ်တစ်ခုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ခေါ်တော်မူကနဦးမဲချိတ်တွင်ယဇ်ကိုပြုရမည် (IFO). အဆိုပါ hardfork အထိယူနစ်တိုးပေးပါသည် 8 ကို MB. အဆိုပါကွန်ယက်ကို micropayments တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကပို့ချခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့နည်းပညာကို Lightning ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသည်. ထို့အပြင်, စူပါ Bitcoin ကွန်ယက်ကိုစမတ်စာချုပ်များအပြေးနေသည်. developer များမှတ်စု, သို့သော်, အမဲချိတ်တွင် crypto အသိုင်းအဝိုင်းအလိုဆန္ဒများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင်း.
လျှပ်စီး Bitcoin - ကွန်ယက်ဌာနခွဲယူဆရသည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ဒီဇင်ဘာ 23 ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ် 499,999. အသစ်ကကွန်ယက်၏ developer များ Bitcoin နှင့် ethereum ရဲ့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုပေါင်းစပ်ချင်. ထို့ကြောင့်, အဆိုပါ Lightning ကွန်ယက်နည်းပညာကိုလည်း micropayments ထွက်တင်ဆောင်လာသောများအတွက်အသစ်သောကွန်ယက်နှင့်သစ်ကို DPOS များတွင်အသုံးပြုပါလိမ့်မည် (ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လောင်းကြေး၏အထောက်အထား) ယန္တရားသဘောတူညီမှုလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်. ထရန်ယူနစ်တိုးမြှင့်ဖို့2ကို MB, အရာငွေပေးငွေယူမြန်နှုန်းကိုတိုးပွါးစေနှင့်ကွန်ယက်မတ်စာချုပ်များကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်. အဆိုပါကွန်ယက်ကိုလည်းအထိကြာလိမ့်မယ်အရာသစ်တစ်ခုပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖန်တီးမှုတစ်ခုတိုးလာမြန်နှုန်းရပါလိမ့်မယ်3စက္ကန့်. hardfork SegWit ထောကျပံ့ပေးမထားဘူးနေစဉ်, ကထပ်ခါတလဲလဲငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအနေဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး. သို့သျောလညျး, ထိုသို့ချဉ်းကပ်ပစ်လွှတ်သည့်ရက်စွဲကြားမှသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, စီမံကိန်းဆဲအလုပ်လုပ်က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိပါတယ်.
ကောင်းမွန်သော hardfork Bitcoin, တရုတ် cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Chandler Guo ခြင်းဖြင့်အစပျိုး, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ဖြစ်ပျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 501,225, အပေါ် 25 ဒီဇင်ဘာလ. အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Pre-သတ္တုတူးဖော်ရေးပေါ်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်, အဆိုပါထုတ်လွှတ်မှုပမာဏစောဒနာမယ်လို့စဉ် 21 သန်းဘုရားသခငျသညျ. အများအပြားကစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုပြီးသားသူတို့သစ်ကို cryptocurrency နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်ပါပြီ, တဦးတည်း၏အအချိုးမှာကိုင်ဆောင်သူ Bitcoin မှလက်ဆောင်အဖြစ်ပါလိမ့်မည်သည့်.
Bitcoin ပလက်တီနမ်တစ်ဦး Bitcoin ကွန်ယက်ကို hardfork အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်, သောပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ဖြစ်ပျက်ယူဆခဲ့သည် 498,577 အသစ်တစ်ခု cryptocurrency ဖန်တီး. သို့သျောလညျး, Cointelegraph သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အဖြစ်, အဆိုပါ hardfork တောင်ကိုရီးယားကနေဆယ်ကျော်သက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့လိမ်လည်မှုဖြစ်ပါသည်, နှင့်ငွေကြေးကိုကိုယ်တိုင် Bitcoin ငွေကုဒ်တစ်ခုအပြည့်အဝမိတ္တူဖြစ်ပါသည်.
ZenCash ၏ co-founder, ရော့ Viglione အမဲသားချိတ် blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုံလောက်သောခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နေ:
open-source ဂေဟစနစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်, သောတစျခုလုံးကိုကုဒ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုသဟဇာတဦးတည်သွားရသော In-စီမံကိန်းကိုတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ချိတ်မှတဆင့်ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိ. ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှုပ်ထွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲကောင်းစွာထုတ်ကိုဖွင့်မထားဘူး, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကြောင်းကြီးတွေထိုးဖောက်ရှိသည်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းင်.
Sweetbridge အတွက် blockchain ၏ဦးဆောင်ပြုစုသူ, ဘော့ Summerville က သူတို့အဖွဲ့ဝင်ကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးသင့်တယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ချိတ်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နေ:
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပွီ, မသေချာမရေရာ, နဲ့ Hard ချိတ်များ၏အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Bitcoin အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသံသယ. ကြောင်းဆူညံသံ၏အများဆုံးအခမဲ့စျေးကွက်အပေါ်အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဆင်ဆာမျက်နှာသာကြောင်းအုပ်စုများမှလာများနှင့်ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ထားပြီးကြောင်းငါ့ထံသို့သိသာဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးအဖြစ်အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည် '' မကောင်းတဲ့အမဲချိတ်။ '' ကိုသင်တဦးတည်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်အခြားအားပေးစရာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကောင်းသောများမှာ. စျေးကွက်ကဆုံးဖြတ်ပါလေစေနှငျ့သငျတနျဖိုးကိုတွေ့မြင်ဘယ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်.
အဆိုပါ ETH / ETC အုပ်စုခွဲမှငါ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကလူနည်းစုချည်နှောင်အလားအလာဖြစ်ကြောင်းခဲ့သည်. တစ်ဦး crypto အသိုင်းအဝိုင်းဖျက်သိမ်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ် အကယ်., ထို့နောက်သင့်ရဲ့သီးခြားနည်းလမ်းတွေသွားနိုင်ပါတယ်, နှင့်ပဲကောင်းပါတယ်. သင်တစ်ဦးကွာရှင်းရနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏အသက်တာနှင့်အတူပေါ်ရွှေ့, အစားအစဉ်အမြဲဒုက္ခအတွက်အတူတကွနေထိုင်နေထက်, အဆက်မပြတ်ငြင်းခုံ။ "
သို့သော် LOOMIA ၏ဒါရိုက်တာ, ရှောလုသည် Lederer အမြင်တစ်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်အချက်ရှိပါတယ်:
"Bitcoin ၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းနဲ့အတူစျေးကွက်ထဲမှာ Saturating အသုံးပြုသူများရှုပ်ထွေးသည်နှင့်သင်အမြဲကလမ်းဆုံလမ်းခွနှင့်ထောက်ပံ့ရေးနှစ်ဆနိုင်ပါတယ်ကတည်းက Bitcoin-၏ကန့်သတ်အရေအတွက်အားရှိပါတယ်ကြောင်းပြောဆိုချက်ကို discredits,"Lederer မှတ်ချက်ပြု. "ဘာနက်ရှိုင်းစွာဒုက္ခရဲ့ဤအလှည့်ဖျား-off ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရွယ်အစားကန့်သတ်ကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံအပေါ် Bitcoin အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အတော်လေးအသေးအဖှဲတွင်းကနေပေါကျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. အဲဒီအစားသဘောတူညီချက်မှလာမယ့်များ၏, ရပ်ရွာ, developer များ, နှင့်ကုဒ်များကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများသို့ကျိုးနေကြတယ်။ "
Previous Post:Blockchain သတင်းများ 11 ဇန္နဝါရီလ 2018
Next Post:Blockchain သတင်းများ 12 ဇန္နဝါရီလ 2018